Coronavirus ao La Frantsa: 89 maty ao anatin’ny indray andro | NewsMada
Coronavirus ao La Frantsa: 89 maty ao anatin’ny indray andro
Zava-doza ho an’i La Frantsa sy Italy ity aretina coronavirus ity raha efa miha mihafana izany any Chine. Tao anatin’ny 24 ora monja, olona 89 no maty tao Frantsa, araka ny tatitry ny minisitry ny fahasalamana frantsay. 931 ireo tena marary mafy miady amin’ny fahafatesana ka olona manodidina ny 60 taona ny antsasak’izy ireo. 9.134 ny tranga voamarina .
Raha ny salanisa maneran-tany, firenena 159 no voakasiky ny aretina ary mitontaly 9.000 ireo namoy ny ainy. Mahatratra 220.000 ireo olona marary.
Ny alarobia teo, trangana aretina Coronavirus tamina olona telo ihany koa no hita tao amin’ny Nosy Maorisy. Teratany maorisianina mihitsy izay nivahiny tany ivelany ireto mitondra tsimokaretina ireto.
Miasa amina sambo vaventy mpitondra mpizahatany ny roa amin’ireo marary ireo. 21 taona sy 25 taona izy ireo. Olona iray 59 taona avy any Angletera kosa ny iray nahitana ity aretina Coronavirus covid-19 ity ao Maorisy.
Natoka-monina avy hatrany ao amin’ny hopitaly izy ireo hisorohana ny fiparitahan’ny aretina amin’ny hafa.
Nanakatona avy hatrany ny sisin-taniny ihany koa ny Nosy Maorisy ary tsy misy fiaramanidina mitatitra olona miditra intsony ao aminy. Voakasik’izany ihany koa ny fitaterana olona an-dranomasina.
Voatery natoka-monina avokoa ireo mpandeha rehetra ao amin’ny seram-piaramanidina Plaisance hifehezana ny aretina.
Nandray fepetra avy hatrany nampitsahatra ny fampianarana rehetra ihany koa ny minisiteran’ny Fampinarana ao Maorisy ho fitsinjovana ny fahasalaman’ireo ankizy madinika indrindra indrindra. Voakasik’izany koa ny oniversite.
Raha tsiahivina, efa manodidina an’i Madagasikara ny aretina satria efa tonga amin’ireo Nosy rahavavy maromaro ny Coronavirus Covid-19. Anisan’ny efa tratra ny ao Nosy Seychelle, i La Réunion ary izao tonga ao Maorisy izao indray.